Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): "Turn in your arms. The government will take care of you" xxxx no XXX no xxx
"Turn in your arms. The government will take care of you" xxxx no XXX no xxx
at 10/15/2013 07:57:00 AM
အမေရိကန်အင်ဒီယန်းတွေက ပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
"Turn in your arms. The government will take care of you" ( အစိုးရထံ လက်နက်တွေ အပ်နှံရင်.. လုိုအပ်သမျှ ကိစ္စအဝဝကို အစိုးရ တာဝန် ယူမည်။ )
အမေရိကားမှာ တချိန်က ဒေသခံအင်ဒီယန်း တိုင်းရင်းသားများ နောက်မှ ဝင်ရောက်လာတဲ့ ဥရောပ လူဖြူတွေရဲ့ ကျးကျော် နယ်ချဲ့လာနေမှုကို ရရာလက်နက် ဆွဲကိုင်တော်လှန် ခဲ့ကြတယ်။
လူဖြူများဟာ အင်ဒီယန်း တို့ရုိုးသားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူကာ တရားဝင် ချုပ်ထားတဲ့ စာချုပ်ပေါင်းမြောက်များစွာကို အကြိမ်ကြိမ် ချိုးဖောက် လိမ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့် ဒေသခံ/နယ်မြေခံတို့ လူမျိုးပျောက်၊ ကိုယ်ပိုင်ဒေသ ပျောက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
လက်နက်ကိုင်ခဲ့တဲ့ အင်ဒီယန်း လူမျိုးစု အချို့သည်ပင် ဥာဏ်များတဲ့ ဥရောပလူဖြူကို အယုံမှားကာ "လက်နက်နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး" လဲလှယ်ခဲ့တာကြောင့် ယနေ့ အမေရိကား US ဟာ လူဖြူကြီးစုိုးတဲ့ နိုင်ငံလုံးလုံး ဖြစ်လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ငြင်းမရတဲ့ သမိုင်းအဖြစ်အပျက်တွေ ဖြစ်တယ်။
ညီနှောင်တိုင်းရင်းသားအပေါင်းတို့ သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြပါစေ။...
ဓာတ်ပုံ။ ။ "Turn in your arms. The government will take care of you" အစိုးရထံ လက်နက်တွေ အပ်နှံရင်.. လုိုအပ်သမျှ ကိစ္စအဝဝကို အစိုးရ တာဝန် ယူမည်။